Ntughari ohuru nke Scratch 3.0 omumu ihe omumu biara | Site na Linux
Taa, anyị ga-ekwu maka oru ngo magburu onwe ya nke emere maka gburugburu agụmakwụkwọ na ụmụntakịrị nọ n'ụlọ anyị chọrọ ịmụ banyere mmemme, agbanyeghị na ọ bakwara ndị okenye na ndị toro eto eto.
Ihe oru ngo anyi gha ekwu banyere ya bu Sccha nke bụ asụsụ a na-ahụ maka mmemme nke ihe njiri mara ya bụ ikwe ka mmepe nke ọgụgụ isi site na imuta mmemme n’enweghi ihe omuma banyere koodu.
Ihe njiri mara ya jikọtara ya na nghọta dị mfe nke echiche mgbakọ Ha emeela ka ọ bụrụ ihe a ma ama na agụmakwụkwọ nke ụmụaka, ndị okenye na ndị okenye.
A na-eji asụsụ mmemme a eme ihe maka ebumnuche mmụta iji mepụta mmemme dị mfe ma rụọ ọrụ dị ka mmeghe nke ọdịnaya mmemme dị elu.
A nwekwara ike iji ya maka ọtụtụ ihe ntụrụndụ na ndị na-ewu ụlọ agụmakwụkwọ dịka: ọrụ sayensị (gụnyere ịme anwansị na nlele nke nnwale), okwu nkuzi edere na ihe ngosi animated, akụkọ sayensị na-akpali akpali, mmekọrịta mmekọrịta, egwu, wdg.
Nwere ike ịhụ ọrụ dị iche iche dị na weebụsaịtị Scratch, gbanwee ha na ọbụna nwalee ha na-enweghị ịchekwa mgbanwe ahụ ebe ọ na-achọghị ụdị ndebanye aha ọ bụla.
Site n'enyemaka nke Scratch, a na -emepụta mmemme site na ịmegharị usoro mgbagha ndị ejikọtara na usoro mgbagha site na ntụnyere na nzukọ Lego.
Enwere ike ịmalite gburugburu dị ka ngwa dị iche ma ọ bụ nyefee dị ka ọrụ ịntanetị iji mepee na ihe nchọgharị.
Ratkọ na-enye ndị ọrụ ohere iji mmemme a na-eme ihe omume na ọtụtụ ihe akpọrọ akpọrọ sprites.
Enwere ike ịse Sprites dị ka eserese vector ma ọ bụ bitmap, site na weebụsaịtị nke Scratch site na iji nchịkọta akụkọ dị mfe nke bụ akụkụ nke ọrụ ahụ, ma ọ bụ ha nwekwara ike ibubata site na isi mpụga gụnyere webcam.
1 Banyere ụdị ọhụrụ nke Scratch 3.0
2 Esi nweta 3.0?
Banyere ụdị ọhụrụ nke Scratch 3.0
Emeputara uzo ohuru ohuru nke Scratch 3.0 visual mmemme gburugburu ebe obibi na nso nso a, nke ndị nyocha mepụtara na Massachusetts Institute of Technology dị ka ebe nnwale nnwale maka ịkụziri ụmụaka koodu.
Agbakwunyere ọtụtụ usoro ihe omume ọhụrụ, gụnyere blọk maka ịmepụta nsonaazụ ụda, ndị na-arụ ọrụ okwu, mgbochi maka ịbịaru, na ijikwa eserese eserese.
Ebuputala akwukwo akwukwo ohuru edeputara, nke awade ọzọ blocks, gụnyere ndị na-ekwe ka mmekọrịta na mpụga akụrụngwa na ọrụ.
Ihe ngwugwu gunyere udiri ohuru, olu na ihe onyonyo. The interface na-emegharị maka iji na mbadamba.
Esi nweta 3.0?
Ọ dị mkpa ikwu nke ahụ n'oge ahụ Enweghi nchịkọta ngwa ọrụ na-anọghị n'ịntanetị maka Linux, yabụ n'oge ahụ ndị mmepe na-enye anyị nchịkọta naanị maka Windows na Mac OS.
Enwere ike ịnweta ngwungwu maka sistemu ndị a na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ọrụ a na mpaghara nbudata ya. Ọ njikọ bụ nke a.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya bụ ọrụ magburu onwe ya enwere ike iji mee ihe na ntọala agụmakwụkwọ site na ụlọ akwụkwọ elementrị ruo ụlọ akwụkwọ maka ndị okenye chọrọ ịmalite mmemme na ụzọ dị mfe.
Otu ihe dị mkpa ịmara bụ na ndị mmepe Scratch na-arụ ọrụ na ụdị nke ngwa ha ka enwere ike iji ya na Chromebooks yana na ha nwere atụmatụ maka Linux ọbụlagodi na ọ bụghị n'ọdịnihu dị nso.
N'oge ahụ maka ndị nwere mmasị ịmara ntakịrị ihe gbasara Scratch ma chọọ iji ya na Linux, naanị usoro anyị nwere ike iji bụ site na ihe nchọgharị weebụ anyị Na njikọ na-esonụ.
Enwere ike iji ngwa maka Windows site na enyemaka nke Wine na Linux, ọbụlagodi na m nwara ịwụnye ya ngwa ngwa, atụbara m njehie, ọ bụrụ na mmadụ jisie ike mezuo ya, anyị ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ịkekọrịta nhazi gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ntughari ohuru nke uzo Scratch 3.0 di ebe a
Echere m na nchịkọta ndị na-anọghị n'ịntanetị sitere na Scratch 2.0
Composability: usoro ohuru nke 2019 maka oghere-emeghe?
ShellCheck, ịba uru iji lelee ederede Shell gị